Maxkamadda sare ee Maraykanka: “qofka dilka ku xukuman ma dooran karo sida loo dilayo” | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxkamadda sare ee Maraykanka: “qofka dilka ku xukuman ma dooran karo sida...
Maxkamadda sare ee Maraykanka: “qofka dilka ku xukuman ma dooran karo sida loo dilayo”
Maxkamdda sare ee dalka Maraykanka ayaa xukuntay in qofkii dil gaystay ee sugaya in la daldalo aanu xaq u lahayn in loo dilo “qaab aan xanuun badan lahayn”.
Xukunka ayaa kala caddeeyey qaabka loo khaarajinayo Russell Bucklew, oo dalbaday in lagu dilo gaas halkii lagu dili lahaa cirbadda sunta ah sababo la xiriira xaalad caafimaad.
Bucklew ayaa lagu xukumay dil sanadkii 1996, sababo la xiriira kufsi, dil, afduub iyo weerar uu u gaystay saaxiibaddiisii hore iyo saygeedii cusbaa iyo wiil lix jir ahaa.
Dhagaysiga dacwaddiisii ugu dambaysay, ayaa Bucklew waxa uu dalbaday in aan lagu dilin cirbadda sunta ah ee dadka lagu khaarajiyo sababo la xiriira jirro uu tan iyo yaraantiisii qabay, lagana yaabo in cirbaddaasi ay u keento xanuun xad dhaaf ah marka la dilayo.
Xaaladdaas caafimaad ayaa keenaysa in ninkaas uu dhiig kaga furmo hunguriga, qoorta iyo wajiga, arrintaas oo uu sheegay in ay jirkiisa dhibaato iyo xanuun aan xad lahayn u keenayso marka la khaarajinayo.
Sida uu sheegay Bucklew, waxa uu dareemi doonaa xanuun xad dhaaf ah haddii loo dilo qaabka ay dawladdu door bidayso ee ah in cirbad lagu dilo.
Hase ahaatee garsooreyaasha maxkamadda sare ee muxaafidka ah ayaa Isniintii sheegay in ay arrintaasi ay tahay marmarsiiyo lagu hor istaagayo sharciga.
Waxa ay sheegeen in qofka maxbuuska ah laga rabo caddayn ku qaaddan qaab kale oo lagu khaarajin karo “oo yaraynaya khatarta ka dhalan karta xanuunka ba’an”. Hase ahaatee maxbuuskaas aanu sidaas samayn.
Warqad uu qoray, garsoore Neil Gorsuch ayuu ku sheegay in Bucklew uu xukunka dilka ah sugayey in kabadan 20 sano.
“Dib u eegistii sideedaad ee dastuurka Maraykanka ayaa mamnuucaysa qaababka khaarajinta ee naxariis darrada ah, balse taasi maxbuuska uma damaanad qaadayso geeri bilaa xanuun ah”. Sidaas waxaa qoray garsoore Gorsuch, oo madaxweyne Trump uu magacaabay sanadkii 2017-kii.
Garsooreyaasha Liberal-ka ee qaybta ka ah maxkamaddaas, oo uu kamid yahay garsoore Stephen Breyer, ayaa codsaday in xaaladda Bucklew ay tahay in loo oggolaado in lagu khaarajiyo gaaska nitrogen, oo ah qaab maxaabiiskta lagu daldalo oo ka jira saddex maamul goboleed.
Kiis kale oo ka dhacay gobolka Alabama, ayaa nin Muslim ah waxaa laga mamnuucay in loogu yeero imaamka masaajidka si uu ula joogo marka la khaarajinayo, maxkamadda ayaa sidoo kale joojisay xukun kaas lamid ah kadib markii nin haysta diinta Buddhism-ka uu dalbaday in loo keeno wadaad la taliya marka la khaarajinayo.
Waa markii ugu horreysay ee ay shirkaddan macaamiisheeda la wadaageyso sirta ku saabsan shaqadeeda
Xarumo dumarka u gaar ah oo laga furey Burco iyo Istanbul
Ra’iisul wasaare: Diyaaraddeydu waxay si dirqi ah uga baxsatay diyaaradaha dagaalka ee Turkiga
Previous articleprof cabdi cali, qofku mar haddii aanu wax soo dilin ama danbi bani’ aadam oo foolxun soo gelin, ma jirto dawlada adduunka ah oo kaa yeelaysa qofkaasi lacag baan ku leeyahay ee ii soo qabta,
Next articleDeg deg, Suldaan Maxamed cabdilqaadir oo Si Adag uga haflay Arinka ganacsade Axmed Geele Arab